spain | Otu Di na Nwunye
October 14, 2019 + Europe, Ebe nkiri ebe nkiri, Ihe efu, Spain
October 12, 2019 + Tinye, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka, Spain
March 2, 2019 + Europe, Spain, Nhazi njem
O nwere ike ịbụ na ị nụla banyere Malaga dị ka obodo Costa Del Sol nke nwere ọganihu kariri, ihe ụtọ na akụkọ ihe mere eme karịa ọtụtụ obodo ndị ọzọ. Ma Malaga dị ka ógbè, nwere ụdị obodo dị iche iche na obodo nta ndị dị na mpaghara ya. Ebe nkiri ntụrụndụ Mediterranean dị ka Marbella na Torremolinos ka na-adọta ụmụ anụmanụ na n'ụzọ ziri ezi otú ahụ, ka ha nwere ọtụtụ ihe ... GỤKWUO
September 30, 2018 + Europe, Spain, Nhazi njem
Ebee Ka I Nọrọ na Barcelona
Ịtụpụta ebe ị ga-anọ na Barcelona siri ike, ịsị nke kachasị. Ọ bụ obodo nwere ọtụtụ ọsọ ọsọ, ọdịbendị, na ihe ọkụkụ nke na-amasị ndị mmadụ dị iche iche. N'ezie, nke a bụ otu n'ime ihe mere Barcelona ji mara amara n'etiti ndị na-abụghị ndị Western, ma ọbụna ndị Europe na-achọ ịchọpụta nke ọzọ na mpaghara nke ha. Ọ dị mkpa n'ịchọ ebe ị ga-anọ na ... GỤKWUO
January 26, 2018 + Europe, Njem ego njem, Nhazi njem
Kedu oge kacha mma iji gaa Europe?
Ikpebi oge kachasị mma ịga leta Europe na-adabere n'ọtụtụ ihe, nke niile na-ekpebi ụdị njem ị na-achọ na ebe ịchọrọ ileta, kpọmkwem, na Europe. Ma, e nwekwara ihe nke atọ ị ga-atụle mgbe ị na-achọpụta oge kachasị mma n'afọ iji gaa Europe - ọnụahịa. Ihe ndị a nile na-atụsi ike, na-agbanwe site na mmadụ gaa na onye .... GỤKWUO